Zvibhorani zvakafa zvogadzirwa
You are at:Home»NHAU DZEVARIMI»Zvibhorani zvakafa zvogadzirwa
By Kingstone Mapupu on	 December 29, 2017 · NHAU DZEVARIMI
SANGANO rakazvimirira rogadzirisa zvibhorani zvakafa kudunhu reRushinga richibatsirana nebazi reDis-trict Development Fund (DDF) nedonzvo rekusimudzira mabasa ekurima.
Chirongwa ichi chiri kutsigirwa nesangano reWASH, iro rinove pasi peUnicef, richibatsirana neDDF. VaGeorge Matimura (36) – avo vanove borehole pump mechanic – vari kutungamirira chirongwa ichi kuRushinga vanoti vanoda kugadzirisa zvibhorani zvose zvisiri kushanda kudunhu iri.
“Chirongwa ichi tiri kuchiita tiri pasi pesangano reWASH, iro riri pasiwo peUnicef, richibatsirana nebazi reDDF. Tiri kufamba mumawadhi ose 25 ari mudunhu reRushinga,” vanodaro.
Pakashanyirwa dunhu iri neKwayedza nguva pfupi yadarika, VaMatimura nechikwata chavo vakawanikwa vachigadzira zvibhorani kuwadhi 22 kwaMambo Makuni uko vainge vakatarisana nekugadzira zvibhorani 18.
Vanoti mudunhu rose reRushinga vakatarisana nekugadzirisa zvibhorani zvinokwana 217. Chirongwa ichi chakatanga nemusi wa14 Mbudzi gore rino.
“Mune zvikwata zvakawanda zvenyanzvi dziri kufamba dzichigadzira zvibhorani zvakafa izvi, apo tinotarisira kupedza gore rinouya kumavambo kwaro kana pakati. Tinotarisira kuti varimi vose vawane mvura sezvo dunhu rino richinetsa mvura zvikuru,” vanodaro.
Vanoti panyaya yezvinodiwa, angava masimbi kana mapombi pakugadzirisa zvibhorani izvi, harisi dambudziko sezvo zviri kutengwa nesangano reWASH.
“Mubasa ratinoita iri tine vakuru vekusangano reWASH nevekuDDF avo vanozouya vachitarisa nekuongorora basa ratinenge taita kuti rakanaka here kana kuti rakaipa,” vanodaro VaMatimura.
Sabhuku Sumburero, VaVanada Karumuberere (95), vanoti vanotenda zvikuru chirongwa ichi icho chiri kubatsira varimi mumabasa avo akasiyana anosanganisira epamba, muminda, mumapindu pamwe nekuwanisa zvipfuyo mvura yekunwa.